Gịnị kpatara na ozi ịntanetị anaghị eme ya na Igbe mbata? | Martech Zone
Offọdụ ụlọ ọrụ anyị na-ezute na-eziga ozi email ha niile, gụnyere ozi sistemụ, site na sava ha. Ọtụtụ n’ime ha enweghị ụzọ ọbụlagodi ịhụ ma ozi ịntanetị na-aga ebe ha na-aga… na ọtụtụ n’ime ha abụghị. Echekwala na n'ihi na ị zitere email na o mere ya n'ezie na igbe mbata.
Nke a bụ ya mere e nwere ihe dum ụlọ ọrụ nke ndị na-enye email. Email bụ ngwá ọrụ dị egwu - na - ebute mbugharị kachasị elu karịa usoro ọ bụla ọzọ dị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị anaghị enwe nke ahụ, email gị nwere ike ịpụ - mana ọ gaghị agụ ma ọ bụ mepee.
Blacklist nke ụlọ ọrụ - Imirikiti ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISP) denye aha na ụlọ ọrụ ndị na-ede aha ojii. Amgha bụ ihe a maara nke ọma blacklist ọrụ. Ztù dị iche iche dị ka Spamhaus na-enyocha oke mkpesa nke azụmahịa na-enweta na ọnụ ụzọ dị ala. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị chọtara onwe ya na ndepụta aha ojii, ISP ọ bụla nwere ike igbochi ozi ịntanetị gị niile na adreesị IP gị. Enwere ọtụtụ narị ndị oji - ebe kachasị mma ị ga - eme bụ ịdenye aha na ọrụ nlekota Blacklist iji hụ na ịnọghị na nke ọ bụla yana ịnweta enyemaka na otu esi ewepụ ha.
ISP Blacklist - Ndị na-enye Nweta Ntanetị dịka Yahoo! AOL na ndị ọzọ na-echekwa aha ndị oji ha. Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji hụ na ọnụego nnabata dị elu, gụnyere ịnweta ụlọ ọrụ gị whitelisted soro ha. Ọ bụrụ na ị na-eziga ozi-e site na sistemụ gị, jide n'aka na ị ga-ama ndị IT gị aka itinye nlekọta dị mkpa n’ọnọdụ.
Soft Bounces - Mgbe ụfọdụ igbe igbe igbe juputara na email ma ọ bụ onye na-eweta anaghị anabata email ahụ. Ha zipụrụ ozi ibiaghachi ọzọ. A na-akpọ nke a a adụ nro. Ọ bụrụ na sistemụ gị enweghị ụzọ isi ejizi ibiaghachi dị nro, ị gaghị ezipụ ozi email ọzọ mgbe onye ọrụ mechara mechaa igbe mbata ha. Nke a na-akpọ ibiaghachi management na ọ bụ nnọọ mgbagwoju. Iji mee ka ọnụego nnyefe dị elu, ndị na-enye ọrụ email ga-anwa ịzigharị ozi ịntanetị ọtụtụ oge ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ike Ike - Ọ bụrụ na adreesị ozi-e anaghịzi adị, onye na-eweta ọrụ ga-ezighachi ozi. Ọ bụrụ na usoro gị anaghị eme ihe ọ bụla na ozi ahụ ma na ị na-aga n'ihu na-eziga na adreesị ahụ, ị ​​ga-enwe nsogbu. Endingzigharị ozi na adreesị ozi-e ọjọọ bụ ụzọ dị mfe iji banye n'akụkụ ọjọọ nke onye na-eweta ọrụ Internetntanetị. Ha ga-ebido ịtụfuru email gị niile na nchekwa SPAM.
content - Ederede ederede email na ọdịnaya nwere ike ịnwe ụfọdụ mkpụrụ okwu na - ebute nzacha SPAM. Maghị, e zigara email gị ozugbo na ebe nchekwa ihe na onye nnata gị anaghị agụ ya. Imirikiti ndị na-enye ọrụ email (yana ụfọdụ ngwaọrụ ndị ọzọ) nwere nzacha nchịkọta ọdịnaya. Ọ bụ nnukwu echiche iji gosipụta ozi gị iji meziwanye ohere ọ na - eme na igbe mbata.
Ọ dịghị mkpa imebi akụ na ngwaọrụ ndị a. Mgbe ịdebanye aha na onye na-eweta ọrụ Email nwere ike ịkwụ puku kwuru puku, ị nwekwara ike ịbanye na ụfọdụ ọrụ ngwa ọrụ email. Ọnụ ego ha nlekota oru Blacklist, dịka ọmụmaatụ, dị n'okpuru $ 10 kwa ọnwa!
Aug 28, 2011 na 4:59 PM
Nzacha ọdịnaya dị omimi karịa naanị isiokwu isiokwu, kwa. Ọ bụrụ na iji okpu niile dị oke egwu, obi ike, ma ọ bụ ọbụlagodi hyperlinks na nnomi ahụ nke karịrị ụkpụrụ, ị nwere ike ịdakwasị igbe junk.